Iicrylic acrylic sheet ezicacileyo abavelisi kunye nababoneleli - iChina acrylic sheet sheet ecacileyo
umgangatho ophezulu iipaneli ze-acrylic ezicacileyo
Iphaneli ye-Acrylic yinto ebonakalayo yeplastiki enamandla amakhulu, ukuqina, kunye nokucaca okubonakalayo. Iphepha le-Acrylic libonisa iimpawu ezifana neglasi-ukucaca, ukuqaqamba, kunye nokungafihli-kodwa kwisiqingatha sobunzima kwaye amaxesha amaninzi ukuxhathisa iglasi.
Cacisa i-Acrylic Sheet yi-ACRYLIC, eyaziwa ngokuba yi "plexiglass sheet ephathwe ngokukodwa". Uyinto yamachiza. Igama leekhemikhali ngu "PMMA", elilelokuphantsi kwepropylene yotywala. Kwishishini lesicelo, izinto ze-acrylic ezingafunekiyo ngokubanzi zibonakala ngokwamaqhekeza, iipleyiti, imibhobho, njl.
iphepha elibonakalayo elicocekileyo le-acrylic
Cacisa ii-Acrylic Sheets zinokucaca okubalaseleyo, ikristale ecacileyo emva kokucocwa, ukukhanya okuhambisa ukuya kuthi ga kwi-93.4%. ukumelana nemozulu elungileyo kunye nokumelana nobushushu ngaphandle kokuphela kunye nokudakumba;
Amashiti e-acrylic acrylic
Amashiti e-acrylic acrylic aphoswe ngokucacileyo i-acrylic sheet nayo. Ingaqhelekanga ityebile ngaphezulu kwe-15mm.